Indoda iphupha ngani? Ephusheni, khuluma nendoda.
Kuthiwani uma ubona indoda ephusheni? Ukuchazwa kwamaphupho ngamadoda.
Kuthiwani uma umuntu ephupha cishe cishe zonke iziphupho sesibili? Kungaba ubaba, umzalwane, umthandi, usebenza naye, noma nje ojwayelene naye. Ezincwadini ezahlukene zokuphupha - isithombe sesilisa sinezincazelo eziningi eziphikisanayo ezingaholela ekukhohliseni ngisho nokulahla ukwesaba. Eqinisweni, umuntu kufanele athembele kuphela lezo qoqo zokuhumusha eziye zaba khona ezingaphezu kweyishumi, noma ngisho neminyaka eyikhulu, futhi zibe nesimo semithombo eqinisekisiwe. Lokhu kufaka phakathi umhumushi wamaphupho kaVanga noNostradamus. Kuyinto kubo esincoma ukuthi silalele.
Indoda iphupha ngani?
Uma iphupho lakho livakashele isithombe esivamile, maduze uzozwa izindaba ezinhle ezivela kuwo. Umdabu (umfowethu, umkhulu, indodana noma ubaba) uchaza, njengokungumthetho, isenzakalo esijabulisayo, ukugcwaliswa ngempumelelo kwamacala aqalisiwe. Uma ekulimaze noma ekucasule - linda ingxoxo engathandeki noma ukuhlambalaza okungafanelwe.
Uma umuntu ebona omunye umuntu-engxoxweni yebhizinisi. Ukuphikisana naye kuyinkinga enkulu yezezimali noma izikweletu.
Yini umuntu ohamba naye ephuphayo?
Uma umuntu ohambahamba ephuphile ngowesifazane, lokhu akukhulumi ngaso sonke isenzo sakhe sokungcola. Kunalokho, ngokuphambene nalokho - intombazane enjalo ibuhlungu kakhulu futhi ifihla kukho konke okuhlangenwe nakho kwayo. Ngemuva kwephupho elinjalo, umuntu kufanele alindele ukukhuluma komphakathi, ukuqashelwa okujwayelekile phakathi kwabangane noma ngokubambisana.
Kwababamele iqhaza eliqinile, leli phupho likhuluma ngomqondo oseduze nokungagwemeki wehlazo. Ukubona umuntu ohamba-ze endlini yokugeza kuyoba inkulumo enhliziyweni.
Ukukhuluma nendoda ephusheni kuvame ukuphathwa njengomhlangano othakazelisayo ozayo noma uhambo.
Uma ekunika iseluleko noma imiyalo - lalela, ngale ndlela intuition izama ukukudlulisela okuthile, futhi lokhu akufanele kunganakwa.
Kwenzeka ukuthi uvakashelwe umbono lapho ummeli wesilisa ekuthuka noma ekujezisa, okusho ukuthi wenza okuthile okungalungile, ungahlali impilo yakho.
Ukuphupha indoda yokucula - ekuthengeni noma ngesipho esithandwayo.
Insizwa ekhungathekile ekhononda ngezinkinga zayo - izinyembezi. Kweminye imithombo lokhu kuhunyushwa njengokubanda kakhulu noma ukuhlukunyezwa. Kunoma yikuphi, ukubona umuntu okhungayo kuyisimanga esibi, okufanekisela ubuhlungu engqondweni noma ngokomzimba. Amaphupho anjalo kufanele atshele amanzi amanje, athi "kuphi iphupho, kunamanzi."
Indoda engazijwayele ephusheni
Ukubona umuntu engaziwa kusho ukuguqulwa okungenalindelekile kwenhlanhla, inhlanhla. Mhlawumbe unomuntu ozokwenza impilo yakho ibe ngcono kangcono esikhathini esizayo. Zama ukukhumbula izici zobuso bakhe, ukuze kuthi uma kwenzeka uhlangane nengozi, ziqhathanise nomuntu wangempela.
Uma umfokazi ecabanga ngendoda, kufanele alindele izinguquko zebhizinisi. Mhlawumbe, into oyisebenzisayo iminyaka eminingi izomiswa. Kodwa uma lo muntu ekukhohlisa, ehlambalazwa noma ecasuliwe - akufanele uqale noma yimaphi amabhizinisi ngonyaka, njengoba ngeke aphumelele empumelelweni.
Lesi sithombe sivame ukutholakala ngaphambi kohambo oluzayo lwebhizinisi, ukushintsha kwezindlu noma ukukhushulwa. Kwabanye abahumushi, lokhu kubonisa umsebenzi okhuthele ozayo, imisebenzi engenakwenzeka.
Uma uhlanganisa konke okushiwo ngenhla, ungaqonda ukuthi ngokuvamile isithombe sesilisa sibonisa okuthile okujabulisayo nokuhle. Futhi uma sibuyisela amaphupho ethu ngamandla okucabanga, ukuhunyushwa okuthembisiwe kuyoba izikhathi ezinamandla kakhulu. Phela, sonke siyazi ukuthi impilo yomuntu ingumphumela wemicabango yakhe. Ukulala okuhlangenwe nakho okuhle nokuhle endleleni yakho!
Umkhiqizo wekhishi wase-Chinese
Ungabheka kanjani ukushayela ngaphandle kokuchitha imali eningi kulezi zinguquko?
Ukuphumelela kokugijima ekuseni
Amapulangwe amahle: ikhanda lomshado eliphakathi kwezinwele eziphakathi
Inkukhu yezinkukhu e-mango-cream sauce
Ukusetshenziswa nokulimala kokusebenzisa izingono ezinganeni ezisanda kuzalwa
Amber trout abhaka anyanisi
Umsebenzi womuntu onesizungu
Kufanele ngithini embhedeni?